WatchOS 1 beta 6.2.8 inowanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 1 beta 6.2.8 inowanikwa kune vanogadzira
Apple inoisa mumaoko evanogadzira yekutanga beta vhezheni yeWOSOS 6.2.8 neshanduko shoma kubva pane yazvino vhezheni. Iyi beta vhezheni yakavhurwa maawa mashoma gare gare pane iyo tvOS vhezheni uye zvinoita sekunge Apple iri kumhanyisa beta beta kuti isvike kuWWDC yakagadzikana sezvinobvira. Mune ino kesi, isu tinokurudzira kusaisa iyo nyowani beta vhezheni yeiyo smart wachi kana usiri mugadziri, nekuti dambudziko mune software rinogona kukusiya usina wachi kwenguva yakareba uye zvakanyanya saka izvozvi Apple's SAT iri shoma nedenda re COVID. -19.
Idzo nyowani beta vhezheni dzevanogadzira dzakaburitswa hadzipe shanduko maererano nekushanda muawa, iwo matsva anonyatso tarisa pakuvandudza kuchengetedzeka uye kugadzikana kwesystem. Mune ino kesi isu tinofanirwa kudzikama nekuti zvinoita Apple ine shanduko huru muWatchOS 7, iyo yaizounzwa muna Chikumi 22 pamwe nemamwe mavhezheni ehurongwa hwayo hwekushanda.
Muchidimbu, zvinoita sezviri pachena nderekuti svondo rino beta beta haasi kuwedzera shanduko huru kumidziyo, saka haufanire kuiisa kana usiri mugadziri. Mune ino kesi, yeuka kuti iyo vhezheni yewatch inoda beta vhezheni yeIOS pane iyo iPhone uye izvo hapana yeruzhinji beta vhezheni. Iyo nyowani vhezheni yekugadzirisa madiki madudu uye matambudziko akaonekwa mune dzakapfuura shanduro, hapachina imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 1 beta 6.2.8 inowanikwa kune vanogadzira
Zvinhu 3 zvinowedzeredzwa uye zvinowedzera mashandiro matsva eMac uye Apple Watch
Walgreens neApple vanopa madhora makumi mashanu kuvashandisi vatsva veApple Card